Paradise Z (2020) | MM Movie Store
Horror အမြိုးအစားကိုမှကွိုကျပါတယျဆိုတဲ့ရုပျရှငျခဈြပရိသတျတှအေတှကျ ၂၀၂၀ အစောပိုငျးက ထှကျရှိထားတဲ့ဇာတျကားကောငျးလေးနဲ့မိတျဆကျပေးပါရစဒေီကားလေးကတော့ apocalypse တှထေဲမှာမှလူကွိုကျမြားပွီး စိတျလှုပျရှားမှုပိုပေးနိုငျတဲ့zombie apocalypse ကားအမြိုးအစားလေးပဲဖွဈပါတယျဟုတျကဲ့ …….
ဇာတျလမျးအကဉျြးခြုပျလေးပွောပါမယျဒီကားထဲမှာတော့ ဆေးလျနဲ့ရို ဆိုတဲ့ မငျးသမီးခြောလေးနှဈယောကျကအဓိကဇာတျဆောငျအနနေဲ့ ပါဝငျပါတယျ
ပကျြကပျရဲ့ရိုကျခတျမှုကွောငျ့ သူတို့နှဈယောကျဟာလူသူမရှိတဲ့ရပျကှကျတဈခုမှာခိုလှုံတိမျးရှောငျရငျး နထေိုငျစားသောကျနရေပါတယျနထေိုငျစားသောကျရတာတော့အဆငျပွပေမေယျ့သူတို့နရောဟာ စိတျခရြတဲ့နရောတော့မဟုတျပါဘူးဒါအပွငျလူအခငျြးခငျြးခေါငျးပုံဖွတျခငျြတဲ့လူတှနေဲ့လညျးရငျဆိုငျရပါသေးတယျ
တဈနသေူ့တို့နထေိုငျတဲ့နရောကို zombie တှကြေူးကြျောဝငျရောကျလာတဲ့အခါမှာတော့မိနျးမသားနှဈယောကျတညျးနဲ့ ဒီအခကျအခဲ တှကေို ကြျောလှားနိုငျပါ့မလားသူတို့ဘယျလိုရငျဆိုငျဖွရှေငျးကွမလဲ ဆိုတာကတော့……
ဒီလိုစိတျလှုပျရှားစရာအခနျးတှအေပွငျ မငျးသမီးခြောလေးနှဈယောကျရဲ့ nude scene တှလေညျးပါတာဆိုတော့zombie apocalypse ကိုမှကွိုကျတဲ့ ပုရိသယောကျြားတှအေတှကျတော့အခြိုပျေါသကာရညျလောငျးလိုကျသလိုပဲပေါ့ဗြာ
Horror အမျိုးအစားကိုမှကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ၂၀၂၀ အစောပိုင်းက ထွက်ရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေဒီကားလေးကတော့ apocalypse တွေထဲမှာမှလူကြိုက်များပြီး စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုပေးနိုင်တဲ့zombie apocalypse ကားအမျိုးအစားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ …….
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်လေးပြောပါမယ်ဒီကားထဲမှာတော့ ဆေးလ်နဲ့ရို ဆိုတဲ့ မင်းသမီးချောလေးနှစ်ယောက်ကအဓိကဇာတ်ဆောင်အနေနဲ့ ပါဝင်ပါတယ်
ပျက်ကပ်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် သူတို့နှစ်ယောက်ဟာလူသူမရှိတဲ့ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာခိုလှုံတိမ်းရှောင်ရင်း နေထိုင်စားသောက်နေရပါတယ်နေထိုင်စားသောက်ရတာတော့အဆင်ပြေပေမယ့်သူတို့နေရာဟာ စိတ်ချရတဲ့နေရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါအပြင်လူအချင်းချင်းခေါင်းပုံဖြတ်ချင်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ရပါသေးတယ်
တစ်နေ့သူတို့နေထိုင်တဲ့နေရာကို zombie တွေကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့မိန်းမသားနှစ်ယောက်တည်းနဲ့ ဒီအခက်အခဲ တွေကို ကျော်လွှားနိုင်ပါ့မလားသူတို့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြမလဲ ဆိုတာကတော့……
ဒီလိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအခန်းတွေအပြင် မင်းသမီးချောလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ nude scene တွေလည်းပါတာဆိုတော့zombie apocalypse ကိုမှကြိုက်တဲ့ ပုရိသယောက်ျားတွေအတွက်တော့အချိုပေါ်သကာရည်လောင်းလိုက်သလိုပဲပေါ့ဗျာ